Gafuurro-xuntan maxaa ka hadhay? (13.11.2019) - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Gafuurro-xuntan maxaa ka hadhay? (13.11.2019)
Gafuurro-xuntan maxaa ka hadhay? (13.11.2019)
Muddadii u dhaxaysay 232 ilaa 247 ee Hijriga, imabaradooriyaddii baaxadda weynayd ee Cabbaasida ee xarunteedu ahayd Baqdaad waxaa boqor ka ahaa Jacfar Maxamed Haaruun al-Rashiid, kuna maamuusnaa magaca Al-Mutawakil Calallaah, ahaana boqorkii 10-aad ee Cabbaasida.
Ninkan taariikhdiisu wax ay caan ku tahay dhawr arrimood oo ay u gu weynayd hiilkii uu siiyay mad’habta markaa ka dib loo bixin doono Sunni, isaga oo firqooyinkii kale oo dhan la dagaallamay gaar ahaan Muctasilada oo ay nimankii isaga xukunka u ga horreeyay aad u la jireen.
Wax uu badbaadiyay Axmed bin Xanbal oo sannadihii xukunka Ma’muun aad u silcay.Sidaas oo ay tahay Mutawakil sidii boqorrada Cabbaasidu u badnaayeen wax uu ahaa nin ku fogaaday tumashada iyo raaxada adduunka. Qasrigiisu wax uu ahaa gole khamriga, naagaha, muusigga iyo gabaygu sida togagga u durduraan.
Wax ay ahayd marxalad taariikheed oo dawladdoodu barwaaqada heerka u gu sarreeya ka gaadhay, laakiin is la markaa haddana hannaanka maamulku hoos u soo dhacayay. Sababtuna wax ay ahayd Cabbaasida oo is ka fogeeyay Carabtii xinka iyo tacasubka badnayd baqdin ay xukunkooda u ga qabaan darteed, maamulka iyo ciidamadana waxaa aad u gu batay qoomiyado kale siiba Turkida.
Mutawakil qudhiisa Turkida ayaa abti u ahayd sidaa darteed dawladdiiba waa ay yeesheen. Turkida iyo xitaa Eeraantu markii dambe wax ay gaadheen in ay Cabbaasida kii ay doonaan dilaan kii ay rabaanna bokhraan. Mutawakil qudhiisu isaga oo 41 jir ah waxaa dilay oo xukunka ka la wareegay wiilkiisii yaraa ee al-Muntasir oo askarta Turkidu dabada ka waddo.
Sheekada taa ku ma aan keenin ee wax aan ku keenay, madaxnimada in maalmo tiro yar oo la nool yahay la gu dhillaysto waxaa aad u ga qiimi badan xil ummadeed oo la guto iyo baalasha taariikhda oo dahab la gu qorto. Qofku kol haddii uu dhimanayo oo lafihiisu ciidda ku baabba’ayaan qiimiga ka hadhayaa ma aha waxii uu cabbay iyo waxii uu cunay iyo waxii uu kuday, waa se raadka uu dunida ku reebay iyo waxa loo ga aayay.
Mutawakil haddaba isaga oo xaaladdii tumasho ee aynnu sheegnay ku jira ayaa xaqiiqadan la hor keenay.Sidii aynnu xusnay kolkii oo talada qabtay wax uu dagaal ku qaaday firqooyinka aan Sunniga ahayn.
Haddaba maalin baa loo sheegay in uu jiro caalim la yidhaahdo Cali Maxamed Alhaadii oo ka mid ahaa tafiirtii Cali ibn Abii Daalib, kana mid noqon doona imaamyada ay Shiicadu weyneyso, in uu wado abaabul mucaarad xukunkiisa ku soo maqan. Ha la doono oo ha la soo qabto ayuu amar ku bixiyay. Waxaa se loo tagay wadaadkii oo aqalkiisii yaraa is ka dhex fadhiya oo cibaadaysanaya.
Dabadeed isaga oo garbaduuban bay u geeyeen Mutawakil oo qasrigiisii sidii caadiga ahayd tumasho u fadhiya oo koob Khamri ah haysta, waxaana loo sheegay in la ga waayay wax raad ah oo abaabul colaadeed ku shuqul leh.Dabadeed wadaadkii buu dhinaciisa fadhiisiyay oo koob khamri ah u taagay. Waar nin yahow bahalkani dhiiggayga iyo jidhkayga toonna meel ku ma leh ee i ga qallee ayuu ku baryootamay. Haye, haddaba ii gabay ayuu ka codsaday. Gabaygana ku ma wanaagsani ayuu u celiyay. Mayee waa in aad gabaydaa ayuu ku amray.
Dabadeed Sheekh Cali wax uu tiriyay tixdan qalbi dhufashada iyo argagaxa miidhan ah, ilaa Mutawakil gebigiisiiba illintu qoysay. Waxaana la sheegay markii tixdu dhammaatay in uu golihii tumashada iyo waxii yaallayba rafacay. Waa tix dheghadal ah oo qiimaynaysa awoodda adduunka la yeeshaa sida ay u macno daran tahay marka ay adduunka uun ku ekaato. Wax uu yidhi:
باتُو علـى قُلَلِ الأَجْبـالِ تَحْرُسُهـمْغُلْبُ الرِّجالِ فَمَـا أَغْـنَتـْهُمُ القُلَـلُواستُنْزِلـُوا بَعْدَ عـِزٍّ مِـنْ مَعـاقِـلـِهِـمْواُودِعُـو حُـفـَراً يـا بِئْسَ مـا نَزَلـونـاداهـمُ صـارخٌ مِـنْ بَـعـْدِمـا قـُبِـروأَيْنَ الاَسِـرَّةُ والتـِيجـانُ والحُلَـلُأيـن الوجـوهُ الـتـي كـانـتْ مُـنـَعَّـمَـةًمِنْ دُونِها تُضْرَبُ الأَسْتارُ والكِلَلفَأَفْصَحَ القَبْرُ “عَنْهُمْ” حِينَ ساءَلَـهُـمْتِـلْـكَ الوُجـوهُ عَلَيـْهـا الـدُّودُ يَقْتَـتِـل ُقَـدْ طـالَـمـا أَكـَلوا دَهْراً ومـا شَرِبُـوفـأَصْـبَحوا بـَعْدَ طُولِ الأَكْلِ قَدْ اُكِلووطـالـمـا عَـمَّـروا دُوراً لتـُحْـصـِنَـهُـمْفـَفـارَقُـوا الدُّورَ والأَهـْلِيـنَ وارْتَحَلـُووطـالـمـا كَـنَـزو الأمـوالَ وادَّخَــرُوفَخـَلَّـفـوها علـى الأعـداءِ وانـْتَـقَـلُـوأَضـْحَتْ مَـنـازِلُـهُـمْ قَـفْـراً مَعَطَّـلَـةًوسـاكـِنوها اِلَى الأَجْداثِ قد رَحَلُوسَـلِ الخـليـفـةَ إِذْ وافَـتْ مَـنِـيَّـتُـهُأيـنَ الحُماةُ وأينَ الخَيْلُ والخَـوَلُ أَيـنَ الرُّمـَاةُ أَمَـا تُـحـْمَـى بِـأَسْهُـمِهِـمْلَـمـّا أَتَـتْـكَ سِـهـامُ المـوتِ تَـنـْتَقِـلُأين الكُمَاةُ أَمَا حامَـو أَمَا اغْتَضَبُوأيـنَ الجـيوشُ التي تُحْمَى بِها الدُّوَلُهيـهـاتَ مـا نـَفَـعـُوا شيئاً ومـَا دَفَعُـوعَـنـْكَ الـمَـنِـيَّـةَ إِنْ وافَـى بـِهـا الأَجَـلُفـَكـَيـْفَ يَـرْجـو دَوامَ العَـيْـشِ مُتَّـصِـلاًمَـنْ رُوحُهُ بِـحـِبـَالِ الـمَـوْتِ تَـتَّـصِـلُ؟!……………………………………..شرح المفردات:قلل الأجبال : رؤوس الجبال.أغنتهم : نَفَعَتْهُم .الحُلَل : مفردها الحـُلَّـة : كل ثوب جديد .تُضْرَب : تُنْصَب .الكِلل : مفردها الكِلَّة : السِّتْرُ الرقيق .ساءلهم : بمعنى سألهم .قفراً : القَفْر: الخلاء من الارض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ .( والكَلأ : هو العشب رَطْبُهُ ويابِسُهُ )الأجداث : القبور.سَلْ : إِسْأَلْ.وافت : أتَتْْ .الخَوَل : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية.الكُمَاة : مفردها الكَمِي : أي الشجاع أو لابس السلاح لأنه يَكْمي نَفْسَهُ أي يسترها بالدرع والبيضة .+4
WQ/ Ibrahin Hawd Yuusuf
Previous articleRamadaanka iyo Talaadada?
Next articleFatxi Almiskiini oo ah filasoof reer Tuuniisiya ah baa qoray kitaab ciwaankiisu yahay